Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း) - Hello Sayarwon
Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း)
Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း) ကဘာလဲ။
အက်စ်ပရင် ဆိုတာ အက်စီတိုင်ဆက်လီဆလစ်အက်စစ်၏ အခြားနာမည်တမျိုးဖြစ်သည် အနာသက်သာစေသောဆေးတမျိုးဖြစ်သည်။ အက်စ်ပရင် အဆိပ်မိခြင်း သည် အက်စ်ပရင်အား ပမာဏအများကြီးသောက်မိခြင်းသို့မဟုတ် ပမာဏ နည်းနည်အားထပ်ခါထပ်ခါသောက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်။
Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာအလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အက်စ်ပရင် အဆိပ်မိခြင်းရဲ့ အစောဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ နားအူခြင်း နှင့် နားကောင်းကောင်းမကြားရတော့ခြင်းတို့ပါသည်။ ပိုတိကျသောရောဂါလက္ခဏာများမှာ အသက်ရူမြန်ခြင်း အန်ခြင်း ရေဓါတ်နည်းခြင်း ဖျားခြင်း နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း နှင့် အားပျော့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် လက္ခဏာများပိုသိသာလာသည်။ မူးခြင်း စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း ကို့ရို့ကားယားနိုင်ခြင်း ပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းလျောက်ခြင်းနှင့် သတိမေ့ခြင်းတို့ထိဖြစ်တတ်သည်။
အက်စ်ပရင်ကြောင့်ဖြစ်သောပုံမှန်မဟုတ်သောအသက်ရူခြင်းသည် မြန်သည် ပြင်းသည်။ အန်ခြင်းသည် ၃ နာရီမှ ၈ နာရီ အက်စ်ပရင်သောက်ပြီးချိန်တွင်ဖြစ်တတ်သည်။ အသက်ရူမြန်ခြင်း အန်ခြင်းနှင့်ဖျားခြင်းတို့ကြောင့် ပြင်းထန်သောအသက်ရူမြန်ခြင်းတို့ဖြစ်လာနိုင်သည်။
စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း ဖျားခြင်း တက်ခြင်း သတိမေ့သွားခြင်း စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း မေ့မျောသွားခြင်း
ပျို့ခြင်း နှင့် အန်ခြင်း
Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကြောင်းအများကြီးရှိပါသည်။ အချို့သူများက အဆိပ် သို့မဟုတ် အဆိပ်ကဲ့သို့အရာများအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သောက်ကြသည်။ အချို့သောရည်ရွယ်ချက်များမှာ
ကလေးများတွင် အများဆုံးမတော်မဆသောက်မိ၍ အဆိပ်မိခြင်း တမျိုးတွင် အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်းပါသည်။ လုံခြုံအောင်လုပ်ဆောင်ချက်များ ဥပမာ ကလေးမဖွင့်နိုင်သောထုတ်ပိုးမှုများက အများကြီးကူညီပေးနိုင်သည်။
ကလေးများနှင့် အသက်ကြီးသူများတွင် ဆေးပမာဏ မမှန်ကန်စွာသောက်သုံးမှုများကြောင့် အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်းဖြစ်နေသည်။ ဆေးပေါင်းများစွာ ( ဆေးဆိုင်တိုင်းတွင်ဝယ်နိုင်သောဆေး နှင့် ဆရာဝန်ညွန်ကြားချက်နှင့်သောက်ရသောဆေး) တွင် အက်စ်ပရင် သို့မဟုတ် အက်စ်ပရင်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများပါနေတတ်သည်။ အကယ်၍ ထိုဆေးများကိုပေါင်းစပ်သောက်ခြင်း ပမာဏမမှန်ကန်ခြင်း သို့မဟုတ် အချိန်ကြာရှည်စွာသောက်သုံးခြင်းတို့မှ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲအဆိပ်မိတတ်သည်။ ထိုကိစ္စများသည် အသက်ကြီးပြီး နှာတာရှည်ရောဂါခံစားနေရသူတွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သွေးစစ်ခြင်းဖြင့် သွေးထဲရှိ အက်စ်ပရင်ပမာဏကိုသိနိုင်သည်။ သွေးထဲရှိ ပီအိတ် ( အက်စစ်ပမာမ)နှ င့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်စိုက်နှင့် ဘိုင်ကာဗွန်နိတ် တိုင်းတာခြင်းများကလဲ အဆိပ်သင့်ခြင်းပြင်းထန်မှုကိုသိနိုင်သည်။ ကုသနေချိန်တွင် ထိုတိုင်းတာချက်များကိုထက်ခါသလဲလဲလုပ်ခြင်းဖြင့် ထိုလူနာပြန်ကောင်းလာမလာသိနိုင်သည်။
Aspirin Poisoning (အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆိုဒီယန် ဘိုင်ကာဗွန်နိတ် နှင့် ပိုတက်စီယန် သွေးကြောမှတဆင့်ပေးသည်။
နှုံဆော်ထားသော မီးသွေးကို တတ်နိုင်သမျှအစောဆုံးပေးခြင်းဖြင့် အက်စ်ပရင်စုပ်ယူခြင်းကိုလျော့ချနိုင်သည်။ အတန်သင့် နှင့် ပြင်းထန်သောအဆိပ်သင့်ခြင်းအတွက် ဆိုဒီယန်ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ပါသောအရည်ကို သွေးကြောမှတဆင်ပေးသည်။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းမရှိပါက ပိုတက်စီယန်ကို အရည်ထဲသို့ပေါင်းပေးသည်။ ထိုအရည်သည် အက်စ်ပရင်အား သွေးကြောထဲမှ ဆီးထဲကိုပြောင်းသွားစေသည်။ အခြားကုသမှုများလုပ်နေသော်လည်း လူနာအခြေအနေပိုဆိုးလာပါက သွေးမှအဆိပ်သန့်ခြင်း( ကျောက်ကပ်အတုပုံစံဖြင့် အဆိပ်များသန့်ဆင်ခြင်း)ဖြင့် အက်စ်ပရင် အခြား ဆလီစလိတ်နှင့် အက်စစ်တို့အားသွေးထဲမှထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အခြားသော ရောဂါလက္ခဏာများ ဥပမာ ဖျားခြင်း တတ်ခြင်းတို့အား လိုအပ်သလိုကုပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အက်စ်ပရင်အဆိပ်မိခြင်း ကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် အက်စ်ပရင်အဆိပ်သင့်ခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆေးများအား ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင် ညွန်ကြားသည့်အတိုင်းသာသောက်သင့်သည် ။ အခြားသူအတွက် ဆေးညွန်ကြားချက်အား သင်မသောက်သုံးပါနှင့်။
ကလေးများအား မတော်မဆဆေးသောက်မိခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါ။ ဆေးတိုင်းအား ကလေးမဖွင့်နိုင်သော ဆေးဗူးများဖြင့်သိမ်းသင့်သည်။ ကလေးမမြင်နိုင်သောနေရာ သော့ခတ်ထားသော ဗီရိုများတွင်သိမ်းသင့်သည်။
ဆရာဝန်အားဆေးကြောင့်ရသည့် အရင်က မကောင်းသော ဆိုးကျိုးများ နှင့် ယခုမှပေါ်လာသောလက္ခဏာများအားလုံးအားပြောပြပါ။
သင်သောက်နေသောဆေးအားလုံးအားဆရာဝန်ကိုပြောပြပ်။ ဆေးဆိုင်တိုင်းတွင်ရသောဆေး သောက်နေပါကလည်းပြောပြပေးပါ။
Aspirin Poisoning. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/aspirin-poisoning. Accessed October 25, 2017.
Aspirin Poisoning. https://www.msdmanuals.com/home/injuries-and-poisoning/poisoning/aspirin-poisoning. Accessed October 25, 2017.